Waxaa Jira Qolal Badan ... | Martech Zone
Waxaa jira qol badan
Axad, Juun 1, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Meel badan ayaa laga heli karaa dhammaan khalqiga Ilaah. Xuquuqda ku xigta baradhada la shiiday., asal ahaan waxa soo galiyay dullhunk.
My Aabaha tan ayaa iigu soo dirtay emayl waxayna ahayd wax fudud oo aan la wadaagin.
Tani waa xayeysiin loogu talagalay Makhaayada Saskatoon, Greenville, South Carolina, waxaana loo iibsan karaa sida T-Shirt.
Waxaan sidoo kale tijaabinayaa astaamaha 'Blog this photo' Flickr. Waa muuqaal quruxsan oo quruxsan oo aad ka abuuri karto shax-dejineed oo aad ku dhajin karto sawir qoraal ah si toos ah bartaada barta dhexdeeda adoo adeegsanaya muuqaalka dibedda ee bartaada. Markii ugu horraysay ee aan dhajiyay, waxay igu tidhi 'way guuldaraysatay' iyo 'Isku day markale'. Dhab ahaantii ma aysan dhicin, hase yeeshe, markaa ka taxaddar haddii aad taas ogaato!
Taasi waa isla muuqaalka aan u adeegsado inaan ku dhajiyo xiriiriyahayga maalinlaha ah ee ka imanaya Del.icio.us.
Wildcard DNS iyo Subdomains Dynamic ah
Apple Fariimaha Ka Qaadanaya Microsoft?
Jun 3, 2008 saacadu markay ahayd 9:50 AM
Muxuu yahay feejignaan weyn. Waxaan ku arkay xayeysiis la mid ah kuwa loo yaqaan steakhouses oo had iyo jeer iga qosliya (nooc ka mid ah hab dambiyeed dabcan).